Babanjwe ngodobo olunzima abaculi abasafufusa | News24
Babanjwe ngodobo olunzima abaculi abasafufusa
Bakhala bayazithulisa abaculi abasafufusa abathi babanjwe inkunzi yintokazi ebibathembisa lukhulu, ithi isebenzela inkampani yokuqopha iMabala Noise Entertainment (Mabala).
UMthoko Shabalala waseNanda eThekwini nozakwabo uMabusi Dlamini abazibiza nge-Afro Ink bashaywe ngemfe iphindiwe bezitshela ukuthi basebenzisana neMabala kanti baluthwa yiqola elinembobo ekhaleni.
Elandisa ILANGA LangeSonto uMthoko uthi ngelink ye-website abekholwe wukuthi ngeyeMabala ku-Facebook, wangena kuyo waxhumana nowesifazane onguLerato Sebati.
Ukuxhumana kwabo kwedlulele kuWhatsApp ngemuva kokunikezana izinombolo zikamakhalekhukhwini. Ngaleso sikhathi uthi ubengasoli mkhonyovu, konke bekubukeka kuwungqo, kusukela kwimininingwane abayithole ku-Facebook, yi-website nezithombe ebezifakwa yilo Lerato kwi-profile ye-WhatsApp njengoba konke bekunama-logo eMabala.
Uthi kwi-profile ka-WhatsApp uLerato ubefaka izithombe zosaziwayo baseMabala, kucaca nje ukuthi usezintweni.
Uthi lo wesifazane uthe uzodinga uR20 000 ukuze abatholele i-deal eMabala. Uqhubeke wathi makakhululeke ngoba ingxenye eningi yale mali izokhokhwa yibo abeMabala, yena kumele nje acwebezelise ngokuncane ukuze aqale amenzele lezi zimanga zokuyosayinwa ngokugcwele yilesi sitebele.
"Uthe uyi-agent yabo. Ngithole ucingo luvela enombolweni yaseGoli, bengibuza ukuthi ngiyitholile na i-email abangithumelele yona. Le nombolo yiyo kanye evela kulezi zinkundla zokuxhumana nokungenze ngakholwa wukuthi ukuleli hhovisi.
"Nginikele emshinini wasebhange ukuze ngiyofaka imali (ebifunwe nguLerato). Kuthe uma umshini unginikeza inkinga ngisafake u-R1300 ngangena ngaphakathi ebhange ukuyobachazela, bangitshela ukuthi kumele ibuyiswe yilo muntu engimthumelele yona.
"Ubefune u-R1500. Ngiqale phansi ngayifaka yonke (R1500), sengiyifaka ngaphakathi ngoba sesivumelene ngokuthi uzowubuyisa lo R1300 ebengiwufake ekuqaleni," kulanda uMthoko.
OLUNYE UDABA:Ngabe bekungamaMetro FM Awards noma iMabala Noise Awards?
Uqhuba wathi kuthe uLerato sekufanele abuyise u-R1300 wenqaba, wathi "uzoyogeza ngawo izandla" kwizimeneja ukuze izinto zisheshe.
Kwenye ikhophi ye-email okuvela ukuthi iphuma kwi-address ye-email ethi pr@mabalanoise.co.za ngomhla zingama-31 kuNdasa, uShabalala uthenjiswa ukuthi uzohlangana ne-CEO yeMabala uReggie Nkabinde uma eseye kwinhlolokhono mhlaka ziyi-13 kuMbasa ngehora le-10 ekuseni.
Kuthiwe i-CEO izofona mhlaka-7 enyangeni efanayo ukuqinisekisa ukuthi uShabalala lo uzohanjiswa kanjani emahhovisi eMabala. Kwenye ikhophi kuvela ukuthi iMabala ikhokha R270 000 uma isayina umculi iminyaka emithathu nokuyilapho ebethi uzoyithatha khona ingxenye yemali esele uLerato.
Lizame lancama ILANGA LangeSonto ukuthola uLerato njengoba inombolo yakhe kamakhalekhukhwini ingangeni. Umyalezo kaWhatsApp athunyelelwe wona yintatheli kulo le nombolo ungenile, lwavela uphawu lokuthi ufundiwe wi-profile kaWhatsApp ushintshashintsha izithombe, iningi lazo zinemibhalo yaseMabala nabaculi abangaphansi kwayo.
UThobela Dlamini ongesinye sezikhulu eMabala nobhekele ithalente uthi kabanaye umuntu onguLerato eMabala.
"Kukhona umuntu wale nhlangano yabaculi iKUMISA oke wangithinta ngalolu daba kodwa bengisaxinwe yindaba yamaSAMA, bengingakalulandeleli. Lubi njengoba lulimaza nesithunzi seMabala kodwa yena ngeke adabule, sizomvulela icala. Sicela nisilekelele nani ngemininingwane eninayo," kusho uDlamini obuye abe yisikhulu samaSAMA